Hiran State - News: HS:- Shirar ay beelaha Hiiraan si gooyni gooyni ah iskugu arkayaan oo Hiiraan ka bilaawday.
HS:- Shirar ay beelaha Hiiraan si gooyni gooyni ah iskugu arkayaan oo Hiiraan ka bilaawday.
HS:- Wararka caawa naga soo gaaraya caasimada Hiiraan ee Belet Weyne ayaa sheegaya in ay mudo 21 sano kadib ay hada bulshada Hiiraan ka tashanayan aayahooda iyadoona talada iyo aaya ka talinta Hiiraan ay taladeeda wax ku yeelanayaan waxgaradka Hiiraan oo inta badan la dul mari jiray waayadii danbe.
Warar xaqiiqda ku dhaw ayaa sheegaya in ay beeluhu si gooyni gooyni ah u bilaabeen shirar guud iyo kuwo gaar ah iyadoona beelkasta dib iskugu laabaneyso kadibna talo mideysan la imaanayaan marka la iclaamiyo shirweyne guud.
Wey dhici kartaa in waqatiga dheeraado laakinse reer Hiiraan ayaa ugu danbeyn dhisan doona maamul ay u dhan yahiin oo ay ka wada muuqdaan reer Hiiraan. waxaa guul weyn u ah reer Hiiraan in ay doonayaan 99% maamul goboleed ay iyaga gacantooda ay ku dhistaan oo bedela kuwa aysan jirin cid dooratay ee magacyada faraha badan la baxay oo ay qaarkood dhalinyaro 20 jiro ah hor boodayaan.
Nabadgalyada magaalada Belet Weyne ka jirta ayaa saamaxeysa in ay beeluhu u shiraan si gooyni gooyni iyo jamacba. Guud ahaan Hiiraan hada kama jiro wax maamul ah marka laga reebo dhalinyaro ay dhibeyso in ay reer Hiiraan isku yimaadaan oo ay wadatashadaan laakinse aan mudo badan sii jiri doonin ileen bulsho waxaa hogaamin kara qofkii kasbada.
Sida muuqata waxaa meesha hal mar ka baxay maamuladii magacyada badnaa sida Hiiraan State, Dooxada, Ahlusuna, Hiiraan and Midland marba hadii taaladii lagu celinayo waxgaradka Hiiraan iyadoo fikirkeeda lagu ixtiraamayo beelkasta oo Hiiraan degta, iyadoon mudada ay shirarku socdaan la aruurinayo talooyinka nadiifka ah ee ka imaanaya qeybaha kala duwan ee Hiiraan maadama ay dadku badan kood doonayaan horumar, maamul goboleed iyo dowlad dhexe iney dalka ka dhalato bartamaha sanadka soo socda.
Wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga Dr Cabdullaahi Godax Bare oo isagu ku haminayey isaga iyo koox kala jooga dalka Norway iyo Qatar inuu maamul heer gobol ah oo aan aheyn dowlad goboleed ugu ololeynayey ragaas iyadoo uu qorshuhu ahaa in gudoomiye gobol loo magacaabo nin magaciisa lagu sheegay Muxudin oo hada ku sugan dalka Kenya kadib markii uu u yeray wasiirka ka hor intii uusan Hiiraan safarka ku tagin kadibna wasiirka walaalkiis oo jooga dalka Qatar loo dhiibo ciidamada ay reer Hiiraan sameysan doonaan, sidoo kalena nin magaciisa lagu sheegay Saqiir loo dhiibo maaliyada waa rag u muuqda iney go,aano aysan reer Hiiraan u dhameyn iska qaataan laakisne hada arintaas wey ka fashilantay maadama dhalinyaradii gobolka ku sugneyd ee la baxday Dooxada ay shacabkii joogay Belet weyne diideen oo ay yiraaheen inagu ma dooran Dooxane ma naqaano wasiirka iyo raga uu wado xaaladii wey ku xuntahay hada hadii aysan fuduaan doonin oo aysan wada tashi la,aan wax iskaka dhawaaqi doonin sida kuwa hadaba ku sugan Hiiraan ay iskaka dhawaaqeen maamul aan xitaa wadan magaca Hiiraan.
Ragani uu u ololeynayey wasiirku waa kuwii horey u diiday maamulkii Hiiraan State marka maantane Dooxada ma rabaan iney wax ka toos toosiyaan shaleyna Hiiraan State ayey diideen oo ay wax ka soo dhiseen iyagoo horeyna dalka Ingiriiska ugu qabtay shir ay iskugu keeneen Ciise Turunji iyo Cabdulqadir Xaaji Masale iyagoo leh waa in reer Hiiraan la raadiyo. hada maanta arintii waxey mareysaa in talada loo daayo reer Hiiran waxaana laga doonayaa sida masuuliyiinta Hiiraan State ay waxii ay hayaan ula sugayaan shirweynaha ay iskugu imaan doonan reer Hiiraan shaqsikasta oo uu damac hayo iska xaadiriyo maamulka ku iman doona talada iyo wax garadka Hiraan.
Arinta kale ee iyaduna xusuusta u baahan waxey aheyd iney markasta dhihi jireen waa in la mideeyo maamulada sida HS iyo Dooxada iyagoona horeyna u diideen maamulkii ugu yaraan loo maray wado macquul ah oo lagu dhisay Kenya ee Hiiraan State ,hadana Dooxadii iyo Hiiraan State midkoodna ma rabaan waxey doonayan iney noqdaan koox kale oo hor leh walow ay hada ku qasban yahiin iney dadaalada ay wadaan reer Hiiraan dhinacooda ka raacaan wasiirka iyo teamkiisa.
Isku soo duuboo xiligii ay kooxo is magacaabay kaligood ay reer Hiiraan jahwarerin jireen waa laga gudbay waxkastana hada waxey marayaan watatashi iyo maxaa noo dan ah. nin jecleysi iyo kooxeysi waxuu horey u soo baabiyey kooxahii ka horeyey kuwa hada jira marka ma jiri doonto maamul danbe oo ay koox is aruursatay iskood iskaka sameysan doonaan oo Hiiraan ka shaqeynaya ayuu yiri mid ka mid ah waxgaradka ka soo jeeda beelaha Hiiraan oo aad ugu faraxsan in ay reer Hiiraan qabiilka ugu badan iyo kan ugu yar ay mudo 21 sano kadib aayahooda ka tashanayaan oo ay ku midoobayaan dantooda iyadoo aan la garab mareyn talada iyo rabitaanka waxgaradka Hiiraan siiba Ugaasyada, wabarada, Salaadiinta iyo wax la mid ah.
· admin on January 09 2012 00:09:31 · 0 Comments · 2122 Reads ·
14,581,234 unique visits